यो फेरि छुट्टीको समय हो, यहाँ तपाईको नतीजा अधिकतम पार्ने १० रणनीतिहरू छन् Martech Zone
म मिनियापोलिसको एयरपोर्टमा एउटा कियोस्कमा बसेकी छु र घर फर्कदै घर फर्कदै इंडियानापोलिस। मैले भर्खरै एउटा मुख्य कुरा गर्न सकें ConceptOne त्यो विस्तृत छ फुर्ति मार्केटिंग यात्रा र मेरो साथ उपस्थितहरू प्रदान गर्‍यो मार्केटिंग पहल कार्यपत्र। यस इन्फोग्राफिक पढ्ने बित्तिकै यसको प्रतिलिपि लिनुहोस् - यसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ!
कथामा फर्कनुहोस्। म गत हप्ता डेलमा अस्टिनमा पोष्टकास्टिंगको बारेमा उनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीलाई प्रस्तुत गर्दै थिएँ, घर पुगेँ, र केही दिन पछि दक्षिण डकोटाको लागि प्रस्थान गरें। म एउटा कुचिएको हिललाई हेरचाह गर्दैछु ताकि सबै हिंडाईले मलाई पनि पोंछ। सबै चलिरहेको साथ, म दक्षिण डकोटामा अवतरण भयो जहाँ अचम्मको कोरेना कुञ्जीहरू कुञ्जी मिडिया समाधानहरू हामीलाई अतुलनीय साइटहरू देखाउँदै कालो हिल्सको वरिपरि घुसायो। साईड नोट - यो अमेरिकाको सब भन्दा राम्रो गन्तव्य हुन सक्छ जहाँ म कहिल्यै गएका थिए, र म सबै देशभरि गएँ।
जब हामी पहाडमा केही दाखमद्य चाख्न अघि बढ्यौं, हिउँ पर्न थाल्यो। यहाँ वा त्यहाँ फ्ल्याक होईन ... यो वास्तवमा तल झर्दै थियो। यो एकदम सुन्दर थियो ... तर त्यहाँ एक मात्र समस्या थियो।
म प्याकिंग गर्ने र योजना गर्ने काममा व्यस्त थिएँ कि मसँग स्वेटर वा कोट ल्याउन बिर्सिएँ! मलाई थाहा छैन म के सोचिरहेछु। अक्टुबरमा को जैकेट प्याक नगरी पहाडमा जान्छ? (म!)
मेरो कुरा? समय उड्दछ, र यो पहिले नै तपाईंको छुट्टी मार्केटिंग प्रयासहरू योजना गर्न सुरू गर्ने समय हो। MDG विज्ञापन बाट यो इन्फोग्राफिक एक महान स्रोत हो, २०१ Es को लागि १० आवश्यक छुट्टी मार्केटि T रणनीति.
संयुक्त राज्य अमेरिकामा छुट्टी सम्बन्धी बिक्री २०१ 923 मा 20173२ billion अर्ब डलर पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ, जुन गत सीजनको तुलनामा%% बढी हो। त्यो संख्याले तपाइँको टाउकोमा नाच्ने नाचको दर्शनहरू बनाउन सक्छ, तर यसले ठूलो चुनौती पनि प्रस्तुत गर्दछ: अधिक खर्चको मतलब अधिक प्रतिस्पर्धा - र उपभोक्ताहरूको लागि क्रमबद्ध गर्नको लागि अधिक मार्केटिंग सन्देश। MDG विज्ञापन
२०१ Es को लागि १० आवश्यक छुट्टी मार्केटि T रणनीति
सुरु प्रारम्भिक र अन्त्य ढिलो
प्रदान गर्नुहोस् प्रेरणा सबै च्यानलहरू
फोकस गर्नुहोस् सामाजिक संजाल युवा उपभोक्ताहरूमा पुग्न
विशिष्ट हुनुहोस् छुट्टीको बारेमा
निजीकृत गर्नुहोस् तपाईंको सन्देश
भन्दा बढि प्रस्ताव छूट
मोबाइल बनाउनुहोस् एक प्रमुख फोकस
ध्यान दिएर हेर्नु अमेजन
बनाउन लाभ धेरै सजीलो
यहाँ केही अविश्वसनीय समर्थन तथ्या and्क र विवरणहरूको साथ पूर्ण इन्फोग्राफिक छ:
टैग: अमेजनवाणिज्यछुटहरूइकमर्सछुट्टीछुट्टी बजार रणनीतिमोबाइल वाणिज्यविज्ञापन विज्ञापननिजीकरणफर्काउँछसामाजिक संजाल
अक्टूबर २१, २०१ at २:०17 बिहान
साझा डगलस को लागी धन्यवाद!
के तपाइँ "अफ सीजन" को समयमा यी रणनीतिहरू केही लागू गर्न सक्नुहुन्छ?
बिल्कुल, फिलिप! मलाई लाग्छ कि अधिक निजीकृत र निर्दिष्ट सन्देश उच्च ओपन, क्लिक, र रूपान्तरण दर प्राप्त गर्न को लागी प्रमाणित छ। र, ओम्नी-च्यानल समन्वय सँधै प्लस हुन्छ। टिप्पणीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद!